Guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin weerar kasta oo kaga yimaada… – Hagaag.com
Guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin weerar kasta oo kaga yimaada…
Posted on 31 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Dadka reer Beled Xaawo ayaa dareen ka muujiyay warkii ka soo yeeray Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan) ee ahaa in markale ay weerari doonaan Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Wasiirka ayaa sheegay inaanay Degmada Beled Xaawo uga tanaasuli doonin Dowadda Federaalka, haddii cid uga tanaasulayaana ay kol hore Ururka Al Shabaab uga tanaasuli lahaayen.
Guddoomiyaha Gobolka Gedo ee garabka Dowladda Federaalka, Axmed Buule Maxamed (Canjeex) ayaa sheegay in dadka ay u hanjabayaan Wasiir Janan iyo Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey ay dadkoodii uun yihiin.
“Nimanka meesha ka hadlay ee Cabdirashiid iyo Cabaas Ibraahim Gurey waxaa weeye hooyooyinkooda iyo walaalahood ayaa degan Beled Xaawo, waxay u dhaaranayaana waa walaalahood, hooyooyinkooda iyo shacabkooda weeye, waa dadkii la dhashay ee ka soo jeedeen weeye waxay u dhaaranayaan. Marka toban bilood bay is abaabulayeen, waxa ay keeneena waxay ahayd inay labaatan qof oo shacab oo masaakiin ah dilaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Guddomiyaha oo la hadlay VOA ayaa sheegay inay ka feejigan yihiin weerar kaga imaada Ciidamada Jubbaland, inkastoo sida uu sheegay uu fillaayo inaanay ahayn dad dib iska soo abaabuli kara.
“Heegan iyo wax walbaan ugu jirnaa, mana fillaayo dad hadda isa soo abaabuli kara inay yihiin, waa iska waxaa weeye dadka yeysan tagin iyo wax cabsi gelin ah.” Ayuu yiri Gudoomiyuhu.
Axmed Buule Maxamed (Canjeex), Guddoomiyaha Goblka Gedo ayaa xusay in reer Beled Xaawo ay yihiin dadkii Kenya ka difaacay in xuduudooda la qaato.
“Dadweynaha Beled Xaawo dad hadda waxaas loogu hanjabi karo maaha, muuqaal la soo duubayna dad ku yaacaayana maaha. Dad waxaa weeye xuduudoodii inta la dhistay oo Dowladda Kenya ay damacday inay silig mariso, Soomaali intaa u qaylinayay diiday in darbi la mariyo dhulkoodii weeye dadka meesha degan.” Ayuu yiri Guddoomiye Canjeex.